Xarumaha Puntland ee Magaalada Gaalkacyo oo maanta xiran | Baydhabo Online
Xarumaha Puntland ee Magaalada Gaalkacyo oo maanta xiran
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan maanta gabi ahaanba inay xiran yihiin xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen Maamulka Gobolka Mudug iyo masuuliyiinta kale ee Puntland ka tirsan ee ku sugan Magaalada Gaalkacyo.
Amuurtaan ayaa ka dambeysay, kadib markii shalay ciidamo gadoodsan oo Mushaar la’aan ka cabanaya ay tageen Xarunta Wasaaradda maaliyada Puntland, Xarunta Gobolka iyo goobo kale oo ay ku shaqeeyaan Maamulka Gobolka Mudug ee Puntland.
Ciidamadaasi ayaa ku wargeliyay masuuliyiinta xarumahaasi inaysan furi karin goobahan, sidoo kalena wax shaqo ah aysan ku qaban karin, hadii kale ciidamada ay la wareegayaan.
Suxufiyiinta ku sugan Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo waxa ay soo sheegayaa in saaka aanan la furin gabi ahaanba xarumaha Puntland ee Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo, waxaana laga cabsi qabaa in ciidamadaasi ay la wareegaan.
Saraakiisha ammaanka ayaa goor dhaw isugu yeeray Saxaafadda waxayna ka hadli doonaan sababta ka dambeysay ciidamadaasi gadoodsan inay u hanjabeen masuuliyiinta Puntland ee waqooyiga Gaalkacyo ku sugan.
Muddooyinkii dambe ciidamada Puntland ayaa waday gadood ay sameynayeen, iyaga oo ka cabanaya mushaar la’aan ciidanka muddo haysatay sida Saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ay sheegayeen.
Wasaaradda Maaliyadda Puntland ayaa kol hore sheegtay inuusan jirin wax mushaar ah oo ka maqan ciidamada Puntland ee muddooyinkii dambe gadoodka sameynaayay.